ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အလွန် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aung San/Aung San Suu Kyi » ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အလွန်
Posted by အဇဋာ on Jun 10, 2012 in Aung San/Aung San Suu Kyi, Politics, Issues | 21 comments
အကယ်၍လွှတ်တော်ထဲကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရောက်သွားရင် ဘယ်လောက်လုပ်ပေးနိုင်မလဲ?
ဖွဲ့စည်းပုံပြင်မယ်ကိစ္စ ဘယ်အတိုင်းအတာထိ အချိန်ယူမှာလဲ?
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ပြင်ပမီဒီယာမှာတစ်ခုမှာ ဖြေကြားထားချက်အရ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တစ်နေရာရာကို ရရှိခဲ့ရင်ကော လုပ်ပိုင်ခွင့်က ဘယ်အတိုင်းအတာထိရှိမှာလဲ?
၈၈ ကျောင်းသားတွေကိုကော ပြည်သူတွေ ဘယ်လောက်ယုံကြည်လို့ရမလဲ?
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွှတ်တော်ထဲရောက်သွားရင်…ပါတီမထောင်ဘူး၊ Power Politic မလုပ်ဘူးလို့ကြွေးကြော်ထားတဲ့ ၈၈ ကျောင်းသားတွေက လွှတ်တော်ပြင်ပ နိုင်ငံရေးမှာ Institutionalization ကို ပီပြင်အောင်လုပ်နိုင်မှာလား? ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွှတ်တော်ထဲရောက်သွားရင်ပြည်သူတွေက သူလုပ်ခဲ့တဲ့ လွှတ်တော်ပြင်ပက နိုင်ငံရေးလိုမျိုး အပြည့်အဝထောက်ခံဖို့ ဖြစ်နိုင်မလား?
အထက်ပါ အကြောင်းအရာတွေဟာ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ မစခင်(Sunday, 25 March 2012 at 15:00 )က မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ အတိုက်အခံအင်အားစုဘက်ကို ကျွန်တော့်ကိုယ်ပိုင်အမြင်နဲ့ သုံးသပ်ကြည့်ခဲ့တဲ့မေးခွန်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ခု ဒီမေးခွန်းတွေကို ဖြေဖို့ အချိန်စောသေးသလား၊ လွန်နေပြီလားဆိုရင်တော့ အချိန်တန်ပြီလို့ပြောရမယ်ထင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အခု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွှတ်တော်ထဲ ရောက်နေပါပြီ။ ဘာတွေလုပ်နေ/လုပ်ပြီးနေပါပြီလဲ။ အားလုံးမြင်သာနိုင်ပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စ ဘယ်အခြေအနေရောက်သွားပြီလဲ။ သူတို့(လွှတ်တော်အမတ်များ) ပြောသလို ဥပဒေတစ်ခုဆိုတာ အချိန်ယူရမယ်ဆိုရင် နောက် အနှစ် ၂၀ လား။ အစိုးရ ၄ ဆက်လောက်အထိ ဘယ်သူက ဘယ်လောက်လုပ်နိုင်မလဲ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ကျွန်တော့်မေးခွန်းထဲကလို အစိုးရတစ်နေရာတော့ မရသေးပါဘူး၊ မယူတာလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
၈၈ ကျောင်းသားတွေရဲ့ လွှတ်တော်ပြင်ပနိုင်ငံရေး ဘယ်ရောက်နေပါသလဲ။ ခုချိန်ထိ ဥပဒေတစ်ခုပြုနိုင်လောက်တဲ့ အကြောင်းချင်းရာတစ်ခုမှ လုပ်နေတာမတွေ့မမြင်ရသေးပါ။ ကိုကိုကြီးအမြဲတမ်းပြောတဲ့ လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့ သူတို့ကို အစိုးရက ဥပဒေတစ်ချို့နဲ့ ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်တဲ့။ အဲဒီလိုမျိုး အကြောင်းပြချက်တွေကို ထောင်ထဲမှာ ဘဝရဲ့ အချိန်တစ်ဝက်ကိုပုံပေးလာခဲ့ပြီးမှ တစ် နေရတာဟာ ဘာကြောင့်လဲ။ သေချာတာတစ်ခုက ၈၈ မျိုးဆက်ဟာ Administrative Role မှာ မနေဖူးပါဘူး။ ဆိုတော့ရှင်းပါတယ်။ သူတို့ဝန်းရံပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အသက်အရွယ်ကို ကျွန်တော်တို့ သတိမမူမိတာတော့ မဟုတ်လောက်ပါဘူး။ တကယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အလွန် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ ဘယ်သူက ဘယ်သူ့ကို ဘာပြောမလဲ? ကျွန်တော်ဆိုလိုတာက Centralize တို့, Decentralize တို့နဲ့မဆိုင်ပါဘူး..မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကို Change တစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်ပါ…ခု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပြင် တစ်ခြားဘယ်သူက ဘယ်လောက်အလုပ်လုပ်နေနိုင်ပြီလဲ?
လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံဟာ Institutionalization ကို မစရသေးသလို၊ အသားကျဖို့အတွက်လဲ တော်တော် အချိန်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ (ကျွန်တော်တို့ Society ဟာ ပျက်စီးခဲ့ပြီးပါပြီ။ ခုကျွန်တော်တို့က မြို့ပြယဉ်ကျေးမှုအသစ်ကို စတင်ပျိုးထောင်တုန်းပဲရှိပါသေးတယ်-စကားချပ်)
တကယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သာ ဒီကိစ္စ(အပြင်၊ အများကြီးကျန်သေးသည့်) ကို လုပ်မသွားနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်…
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အလွန် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးဟာ..စိတ်ဝင်စရာ(ရင်လေးစရာ) ဖြစ်ပါတယ်…
ဒီ Post ကို “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အလွန်” လို့နာမည်ပေးမလို့ပါခင်ဗျား…
သို့ပေမယ့် အဘယ့်ကြောင့် မသိ…ကျွန်တော် Publish ကိုနှိပ်မိသွားတယ်…
ကိုမြတ်ကျော်သူ ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာ ကျနော်တို့မသိဘူး ဒါပေမယ့် ဒီအချိန်မှာဒါတွေလာပြောတာ နောက်ထပ် ချိန်ကိုက်ဗုံးတစ်လုံးခွဲဖို့ရည်ရွယ်တာလား မလုပ်ပါနဲ့ဗျာ ရွာသူရွာသားတွေနဲ့ပြည်သူအပေါင်း ရိုဟင်ဂျာကိစ္စ ကြိမ်မီးအုံးနေတဲ့အချိန်မှာ နောက်ထပ်အစတွေဆွဲ မထုတ်ပါနဲ့ ကျနော်တို့ယုံကြည်တဲ့သူကို ယုံကြည်လို့မဲပေးပြီးပြီ သူ့တာဝန် သူလုပ်ပါစေ သူပေးဆပ်လာတဲ့ အတိုင်းအတာကိုလည်းပြန်ပြီးလှည့်ကြည့်ပါဦး ဒီအချိန်မှာ ဒီလိုအရေးအသားမျိုးနဲ့ ရွာထဲဝင်လာတယ် ဆိုတော့ ကျနော်ကတော့လက်မခံနိုင်ဘူး ကိုမြတ်ကျော်သူ တစ်ကယ်တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကိုချစ်တယ်ဆိုရင် အခု ရခိုင်ညီအစ်ကိုတွေအတွက် အလှူငွေလေးထည့်သွားလိုက်ပါဦးး)
ကိုမြတ်ကျော်သူ တိုင်းပြည်အတွက် နောက်ထပ် သူရဲကောင်းက ခင်ဗျားဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် ဖုန်းမျှော်နေမယ်ဗျာ။ ၀၉၅၀ ၈၂၈၀၈ ၀င်းကို
ပထမ သူရဲကောင်းက ကိုဝင်းကို များပေလား…..
နောက်သူရဲကောင်းက ကိုမြတ်ကျော်သူ ဆိုလေတော့…..။
ဒီစာကို ကျွန်တော်ရေးထားခဲ့တာ စာပိုဒ်ထဲမှာပါတဲ့ (Sunday, 25 March 2012 at 15:00) အချိန်ကတည်းကပါ။ ဒီအချိန်ဟာ တင်ဖို့ကောင်းတဲ့အချိန်မဟုတ်မှန်းသိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်
ဒီဟာဟာ ချိန်ကိုက်ဗုံးမဟုတ်ပါဘူး။ အစဆွဲထုတ်တယ်လို့လည်း ဘယ်လိုမှ မတွေးပါဘူး။ ကိုမြတ်ကျော်သူ ဆိုတာ ဘယ်သူလဲဆိုတာလည်း ကျွန်တော့်စာတွေက သက်သေပြပါလိမ့်မယ်။ သေချာတာတစ်ခုက တော့ ကျွန်တော်က Criticism ကို အလွန်နှက်သက်တဲ့ သတင်းသမားတစ်ယောက်ပါ။ အကယ်၍ ဒီစာကြောင်းတွေဟာ အခုဖြစ်နေတဲ့ ပြဿာနာတွေကို ချိန်ကိုက်ဗုံးတစ်လုံးလို ဖြစ်စေတယ်ဆိုရင်တော့ တောင်းပန်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ဒီ Post ကိုဖျက်ပစ်ဖို့အတွက် သူဂျီးဆီကို ပြောပါမယ်။ (ဒါက အပိုင်းတစ်ခုပေါ့လေ)
(သူပေးဆပ်လာတဲ့ အတိုင်းအတာကိုလည်းပြန်ပြီးလှည့်ကြည့်ပါဦး) ဆိုတဲ့အစ်ကိုအရေးအသားက ကျွန်တော်ထောက်ပြချင်တဲ့အဓိကအချက်ပါ။ ဒီ Post ကို ကျွန်တော်ရေးခဲ့တာမှာ ဘာလူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးမှ မပါဘဲ လွှတ်တော်နိုင်ငံရေးနဲ့ လွှတ်တော်ပြင်ပ နိုင်ငံရေး၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ၈၈ စတဲ့ သူတွေသာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ နောက်ပြီး အစ်ကိုအနေနဲ့ လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတာက အစ်ကို အမြင်ပေါ့လေ။ ကျွန်တော့်အတွေးက တစ်ခုပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အားကိုးလွန်းနေတဲ့အတွက် ဖြစ်လာမယ့်အကျိုးဆက်တွေးကို တွေးကြည့်တာပါ။ ရှင်းပါတယ်။ အခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေနဲ့လည်း ဘယ်လိုမှ မပတ်သက်ဘူးဆိုတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ (ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အသက်အရွယ်ကို ကျွန်တော်တို့ သတိမမူမိတာတော့ မဟုတ်လောက်ပါဘူး) ဒီစာသားကိုကြည့်ရင် သိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော့်ကို ဝေဖန်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မှတ်ချက်-ကျွန်တော် သတင်း၊ ကဗျာ၊ ဆောင်းပါး တွေရေးပြီး အသက်မွေးပါတယ် ခင်ဗျာ။ ထို့ကြောင့်…..
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဥပဒေပြုအမတ်ဖြစ်တာမှ.. လပိုင်း.. (၂လတောင်မပြည့်သေး) ..
၈၈ မျိုးဆက်တွေ.. နိုင်ငံရေးကိုထိထိရောက်ရောက်လုပ်စေချင်တယ်..
ဟုတ်ပါတယ်။။နည်းနည်းစောနေပါသေးတယ်။။ ဒါပေမယ့် သူ့အသက်က မစောတော့ဘူးလေ။
ကမ္ဘာတန်းတွေဆိုတာ ကျွန်တော်နားမလည်ပါဘူး။ နောက်ပြီးတော့ ၈၈ က အတိအလင်းကြေငြာထားပါတယ်။ သူတို့ လွှတ်တော် ပြင်ပဲ လုပ်မယ်တဲ့။ ကျွန်တော် တွေးမိတာတစ်ခုက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တွန်းအားပေးမယ့်၊အဖွဲ့ ဒါမှမဟုတ် လူတစ်ဦးဦးပေါ့၊ နောက်ပြီး အဲဒီလူ ဒါမှမဟုတ် အဖွဲ့အစည်းဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နောက်ပိုင်းမှာ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားနိုင်မယ့် အဖွဲ့မျိုးဖြစ်ပေါ်လာစေချင်တာပါ။
၈၈တွေကိုလေ့ကျင့်ပေးမှရမှာပေါ့..။ သူတို့မှာ..(တချို့က).. ပညာမစုံပေမယ့်.. နိုင်ငံအပေါ်… စေတနာရှိတယ်.။
သူတို့ကို.. လက်တွေ့နိုင်ငံရေးထဲဆွဲထည့်ပြီး.. ဒေါ်စုအလွန်ကာလတွေကို… ဦးဆောင်ခိုင်းသွားရမယ်ထင်မိတယ်..
၈၈မျိုးဆက် ဆိုတာမှာ.. မြန်မာပြည်အပြင်ရောက်နေတဲ့.. ပညာတတ် ၈၈မျိုးဆက်တွေကိုလည်း.. မြန်မာ့နိုင်ငံရေးထဲပါစေချင်တာပါ..
ဒေါ်စုရဲ့…နိုင်ငံရေးအနုပညာကို.. မြန်မာပြည်ထဲကလိုက်မှီနေတဲ့သူ မရှိသလောက်ရှားမယ်ထင်မိတယ်..
.. ကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းထိပ်ပိုင်းနိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့.. တန်းတူလို့ပြောချင်တာပါ..။
ဒါက.. ကျုပ်စကားမဟုတ်… သူနဲ့တွေ့ဖူးတဲ့သူတွေက.. ပြန်ကြားရတာ..
အင်မတန်ကို မေးသင့်မေးထိုက်တဲ့ မေးခွန်းပါပဲ.လို့..
နောက်တခုက သူကတင်ပေးတိုင်းလည်းအရောင်ထွက်မှာ မဟုတ်လို့..
အရောင်ထွက်နေပြီးသား ဟို ၈၈ဆရာတစုထဲကပဲ ..
ကိုမြတ်ကျော်သူ.. ခင်ဗျား မေးတဲ့ မေးခွန်း နံပါတ်(၁) ကို ဦးသိန်းစိန် နဲ့ ဦးရွှေမန်း တို့ကို မေးပြီးပြီလား? မေးခွန်း( ၂ ) အခြေခံ ဥပဒေ ပြင်ဖို့အချိန် က ဒေါ်စုတစ်ဦးထည်း မေးလို့ မရပါ။ ခင်ဗျားရော ကျွန်တော်ရော အပါအဝင် ပြည်သူပြည်သား တစ်ရပ်လုံး သဘောတူရင် မနက်ဖြန် လဲပြင်လို့ ရပါတယ်။ ကာ/လုံ ကလည်း သဘောတူ ရင်ပေါ့လေ။ မေးခွန်း( ၃ ) နိုင်ငံရေး မလုပ်သော သူများဖြစ် နေ၍ မေးရန်မလိုပါ။ မေးခွန်း( ၄ ) စောင့်ကြည့်ပါဦး သူ့ထက်အရင် လွှတ်တော်ထဲ ရောက်သူတွေနဲ့ ယှဉ်ရင် ကျွန်တော် တစ်ဦးတည်း ရဲ့သဘော ကတော့ လွှတ်တော်ပြင်ပ နိုင်ငံရေး လိုဘဲ အပြည့်အဝ ထောက်ခံဖို့ ဖြစ်နိုင်ပါ လိမ့်မယ်။
ယခုကလေးတစ်ယောက်ကို ဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံမှာ သွားကယ်နေပါတယ်။
ခွဲစိက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် အားလုံးလိုက်ကြည်လို့ရပါတယ်။၀၉၅၀ ၈၂၈၀၈
ခွဲစိက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် အားလုံးလိုက်ကြည့်လို့ရပါတယ်။၀၉၅၀ ၈၂၈၀၈
၈၈ တွေကိုလေ့ကျင့်ပေးရမယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါတယ် အစ်ကို။ ဒါပေမယ့် ၈၈ ထဲမှာ အသက် ၃၀ အောက် ဘယ်သူရှိပါသလဲ။ ကျွန်တော်တို့က သူတို့လေ့ကျင့်ဖို့ အချိန်တော်တော်ပေးရဦးမယ်ထင်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ သူတို့မှာ တိုင်းပြည်အပေါ်စေတနာရှိပါတယ်။ သူတို့လုပ်သင့်တာက၊ သူတို့လုပ်နိုင်တာက၊ (ကျွန်တော့်အမြင်) လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေပါ။ Power Politic မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ကျွန်တော့် စာစုထဲမှာပါသလို သူတို့ဟာ Administrative Role မှာ မနေဖူးပါဘူး။ နောက်ပြီးတော့ ၈၈ တွေရဲ့ ဦးတည်ချက်ဟာ Blur နေပါတယ်။ ခုချိန်မှာ ၈၈ ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြောပါဆိုရင် ဝေဝါးနေပါတယ်။ နောက်ပြီး ၈၈ ထဲမှာ အုပ်စု နှစ်စုကွဲနေပါတယ်။ ပါတီထောင်ချင်တာ(တစ်နည်း-Power Politic) လုပ်ချင်တာက တစ်ဖက်၊ လူမှုရေးလုပ်ချင်တာက တစ်ဖက်(တစ်နည်း-Social Politic) ဖြစ်နေပါတယ်။ သေချာတာက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အလွန်ကာလတွေကို သူတို့ခေါင်းဆောင်မယ်ဆိုရင် နည်းနည်းစဉ်းစားရပါတော့မယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ Art of Politic ကိုလိုက်မီတဲ့သူမရှိဘူးဆိုတာဟုတ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်း ထိပ်ပိုင်းနိုင်ငံရေးသမားလည်း ဟုတ်ပါတယ်။ သူမက မြန်မာနိုင်ငံက နိုင်ငံရေးသမားအများစုထက် နှစ် ၄၀ လောက် ရှေ့ကိုကြိုရောက်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အသက်အရွယ်ကို ထည့်စဉ်းစားရပါတော့မယ်။ နောက်ကျွန်တော်စဉ်းစားမိထားတဲ့ အကြောင်းတစ်ချက်ရှိပါသေးတယ်။ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက သူမ လူရွေးသွားတာကိုကြည့်ပါ။ ဇေယျာသော်၊ နိုင်ငံလင်း၊ စတဲ့ အသက်ငယ်တဲ့သူတွေ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါဟာ လူငယ်တွေကို သူမ နေရာပေးချင်တယ်ဆိုတာ ပေါ်လွင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူမပါတီထဲမှာရော၊ တစ်ခြားနေရာတွေမှာပါ နေရာပေးနိုင်လောက်တဲ့ လူငယ်အလွန်နည်းနေတာကို တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်(တကယ်တမ်းက မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာ ဦးဆောင်နိုင်လောက်တဲ့ လူငယ်အလွန်နည်းနေတာပါ)။ ဆိုတော့ အသက်အရွယ်စကားပြောလာတဲ့သူမနဲ့ over 45 ၈၈ တွေဟာ အဓိက ကျွန်တော့်စာစုထဲက စဉ်းစားစရာတွေဖြစ်လာပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်အမြင်တွေကို အဆိုးမြင်ဘက်ကို ယိမ်းနေသယောင်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲလိုမဟုတ်ပါဘူး။ အလွန်စိုးရိမ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အလွန် နိုင်ငံရေးကို အလွန်စိုးရိမ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
( ဇေယျာသော်၊ နိုင်ငံလင်း၊ စတဲ့ အသက်ငယ်တဲ့သူတွေ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါဟာ လူငယ်တွေကို သူမ နေရာပေးချင်တယ်ဆိုတာ ပေါ်လွင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူမပါတီထဲမှာရော၊ တစ်ခြားနေရာတွေမှာပါ နေရာပေးနိုင်လောက်တဲ့ လူငယ်အလွန်နည်းနေတာကို တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်(တကယ်တမ်းက မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာ ဦးဆောင်နိုင်လောက်တဲ့ လူငယ်အလွန်နည်းနေတာပါ)။ ဆိုတော့ အသက်အရွယ်စကားပြောလာတဲ့သူမနဲ့ over 45 ၈၈ တွေဟာ အဓိက ကျွန်တော့်စာစုထဲက စဉ်းစားစရာတွေဖြစ်လာပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်အမြင်တွေကို အဆိုးမြင်ဘက်ကို ယိမ်းနေသယောင်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲလိုမဟုတ်ပါဘူး။ အလွန်စိုးရိမ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အလွန် နိုင်ငံရေးကို အလွန်စိုးရိမ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။)
ခင်ဗျားရဲ့ စကားအရ တကယ်စိုးရိမ် တယ်ဆိုရင် အဲဒီအတွက် မြင်ထားတာ ရှိလို့များ
ဒီပို့စ် ကိုတင်လိုက်တာလား? ရွာသားတွေကို ချပြလိုက် ပေါ့ဗျာ တစ်ကယ်သင့်တော်ရင် ရွာသား
တွေကလည်း ခပ်ညံ့ညံ့ မဟုတ်တာ သိပြီး ဖြစ်မှာပါ နော
ဆောရီး ကို Aung ရေ…
လွန်ခဲ့တဲ့ ခင်ဗျားပေးထားတဲ့ ကွန်မင့်ကို ပြန်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကွန်က မကောင်းတော့ မရောက်လိုက်ဘူး။ ခု ကျွန်တော်ဆက်ရေးပါ့မယ်။
>> Aung >>
ဟုတ်ပါတယ်။ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ ဦးရွှေမန်းတို့ကိုမေးသင့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့က လုပ်ကိုလုပ်ရမယ့်သူတွေဖြစ်တယ်။ နောက်ပြီး ခုံပေါ်က သူတွေဖြစ်တယ်။ ဘာလုပ်စေချင်တယ်။ ဘာမလုပ်စေချင်ဘူး ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ဘက်က တောင်းဆိုနိုင်ပေမယ့် လုပ်မလုပ် မသေချာဘူး။
ဒါပေမယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့ ကျွန်တော်တို့ ပြောရမယ့်လူဖြစ်နေတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့က အများကြီးမျှော်လင့်ထားခဲ့ကြတယ်လေ။
နံပါတ်(၂)အတွက်က ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့ သတင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို ကျွန်တော်တင်သွားမှာပါ။ (ခေါင်းစဉ်-ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေး ပုစ္ဆာ)
နံပါတ်(၄) အတွက်တော့ အထက်က >> kai >> ကို ပြန်ဆွေးနွေးထားတာလေး ပြန်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော့် Post ကို ခုလို ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဟိုးအထက်က ကိုပေစိပြောထားတာ လေးတစ်ခုကို ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ် ကျွန်တော် ဒီရွာထဲကိုရောက်တာ မကြာသေးသလို ကျွန်တော်ရေးတဲ့ Post လည်း ၁၀ ခုတောင်မပြည့်သေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့် Profile မှာ ကျွန်တော့်ကို ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Profile မှာလည်း link တွေပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
kai နဲ့ ဆွေးနွေးထား တာလေး ဖတ်ပြီး အပေါ်မှာ မေးထားတယ်ခင်ဗျာ့ အဲဒီအချိန်
ကတော့ ခင်ဗျားကို အထင်လွဲပြီး အဆုံးသတ်လေးမှာ နဲနဲငေါ့ထားတယ် တောင်းပန်
ပါတယ်ဗျာ… ဒီစိုးရိမ်မှု ကတော့ ကျွန်တော်တို့လဲ ရှိပါတယ် စဉ်းစားကြတာပေါ့ဗျာ၊
နောင်များ မှာလည်း ဆက်ဆွေးနွေး ကြတာပေါ့ဗျာ..နေကောင်းကျန်းမာပါစေ…တိုင်းပြည်
အတွက် အုတ်တစ်ချပ်ကောင်း သဲတစ်ပွင့်ကောင်း ဖြစ်ပါစေဗျာ…
Barack Obama’s Formative Years in Chicago – US News and World …
http://www.usnews.com › Home › Nation & World
Asacommunity organizer, Obama wasapragmatic leader. By Kenneth T. Walsh. Posted 8/26/07. CHICAGO—Far from the centers of power and privilege that …
အိုဘားမားက အသက် ၂၄က ၂၇နှစ်အထိ community organizer အနေနဲ့.. နိုင်ငံရေးအတွက် အလေ့အကျင့်ရယူခဲ့တယ်..။
အသက် ၄၈မှာ သမ္မတဖြစ်ပြီ..။
.. ပြည်တွင်း ၈၈တွေက.. အရွယ်ကောင်း… တချိန်လုံးထောင်ထဲနေရတာ.. ။ အခုမှ.. အိုဘားမား ၂၄နှစ်အလုပ်လိုလို.. နိုင်ငံရေးလိုလိုနဲ့.. လုပ်ကြရရှာတာ..
မပြတ်သားပဲဖြစ်သွားတာဟာ.. အပြင်ရောက်.. ၈၈တွေရဲ့.. ဖိအားအများကြီးပါတယ်ထင်မိတယာ်..
ဒေါ်စုနဲ့..တွဲအလုပ်လုပ်ခွင့်ရှိတုံး.. လက်တွေ့နိုင်ငံရေးထဲ ၀င်ပြီး.. ၂၀၁၅၀င်ပြိုင်ဖို့ပြင်ဆင်သင့်တယ်..။ တပြိုင်ထဲ.. ကြားမှာ.. ဘွဲ့(အတန်းပညာ) တခုခုယူသင့်တယ်..။
ကိုမြတ်ကျော်သူ.. ကြည့်တဲ့ဖက်ကပြောရင်.. အချိန်မရှိတော့ဘူး..။ အနာဂတ် အတိုက်အခံနိုင်ငံရေးဟာ.. စိတ်ပူစရာကောင်းပါတယ်..။
မြန်မာပြည်ရဲ့ လက်ရှိကာလ အနေအထားက အသွင်ကူးပြောင်းကာလပါ။ ခေတ်ဟောင်းနဲ့ ခေတ်သစ်နှစ်ခုကို ပေါင်းကူးပေးနိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အဲဒီဂျားကာလမှာ ဦးဆောင်သူများသည် လူသစ်ထက် လူဟောင်းများ ဖြစ်လေ့ရှိတယ်။ ရေရှည်မှာတော့ လူသစ်များ မွေးနိုင်နိုင်ဂျင်းဂ တိုင်းပြည်အနာဂတ်ကို ဆုံးဖြတ်ပါဒယ်။ တည့်တည့်ပြောရရင် ၈၈မျိုးဆက်အဖွဲ့ ဂေါင်းဆောင်များ အသက်အရွယ်သည် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်တယ်။
လူငယ် လူဂျီး အကြား လူလတ်ပိုင်းမှာရှိလို့ နှစ်ဖက်စလုံး နားပေါက်နိုင်ဒယ်။ အဓိကလိုအပ်တာ နိုင်ငံတဂါနဲ့ များများထိတွေ့ပေးဖို့၊ ပညာရေးဆက်လိုသူများ ကျောင်းဆက်တက်ကြဖို့ပါ။ ၈၈မျိုးဆက်အဖွဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး အတွေ့အကြုံမရှိတာ မှန်ပါဒယ် သို့သော် တိုင်းပြည်ပျက်ခဲ့တာ လက်ရှိလက်ဟောင်း အုပ်ချုပ်ရေးသမားများကြောင့်ဆိုရင်လည်း မမှားဗာဘူး။ အားလုံး အသစ်က ပြန်စရပါမယ်။
အခုအချိန်မှာ ၈၈အဖွဲ့ဂေါင်းဆောင်များ ကဏ္ဍအသီးသီး တာဝန်ခွဲဝေယူပြီး လှုပ်ရှားနေဂျဒါ တွေ့ရဒယ်။ သဘောတူပါဒယ်… အတွေ့အကြုံ သတင်းအချက်အလက် အခြေခံအဖွဲ့အစည်းမျာ တည်ဆောက်ဖို့ အချိန်တခုပေးရပါမယ်။ ရုံးခန်းထဲကနေ မူဝါဒစဂါးပြောပီး နိုင်ငံရေးဝမ်းစာ ဖြည့်နေတာထက်စာရင် လက်တွေ့ကွင်းဆင်းပီး ပြည်သူလူထုရဲ့ ဘဝလိုအပ်ချက်များကို သင်ကြားရယူတာ တိုင်းပြည်အတွက် ပိုအကျိုးရှိဒယ်။ ထိပ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံရေးမှာ ၈၈အဖွဲ့အတွင်း ပုံသဏ္ဍာန် အတွေးအခေါ်အမျိုးမျိုး ကွဲထွက်ဖို့ကတော့ စစ်တပ်အုပ်စီးထားတဲ့ နာဂစ်အခြေခံဥပဒေ အပြောင်းအလဲရှိမှ ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။